ခင်မင်းဇော်: ကိုလုံးမြို့ကို အသွားလမ်း...
soe lu said...
မောင်လေး လာဖတ်သွားတယ် သေချာဖတ်သွားတာ
ဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး ကိုတိုးကြိးကနေ စိုးလူဖြစ်သွားပြီ သိတော့ဘူးဗျာ
ပေါင်မြို့တို့ ရောက်ခဲ့တာ ရေးပါဦး
visited, read and enjoyed.
ခရီးသွားအတွေ့အကြုံလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ရထား၊ ကား နဲ့ မြစ်သုံးခု ယှဉ်တာ နဲ့ ရိုင်းမြစ်လို့ရေးထားတော့မှ The Bridge at Remagen ဆိုတဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကား တစ်ကားကို သတိရသွားတယ်.. အဲဒီအထဲမှာလည်း အမပြထားတဲ့ ပုံနဲ့ တော်တော်လေးဆင်တယ်.. ဆက်ရေးပါ။ အမနဲ့ အတူလိုက်လည်နေပါတယ်။
ဘာလဲ..အမက.. ၄၉ ယူရိုပေးစီးတဲ့ ၂ နာရီ မှာ အိပ်ဖို့ တွေးမိသေးသလား..း)
ကံကောင်းတယ်ဗျ....Koblenz ဘက်ကသွားတဲ့ရထားကို စီးလို့ အဲလို ရှုခင်းတွေ မြင်ခဲ့ရတာ ....တော်တော်လှပါတယ်.....Gießen ဘက်က သွားရင် လယ်ကွင်းတွေပဲ တွေ့ခဲ့ရမှာ..
ဂျာမန် အဖိုးရဲ့ ပုံက အနောက်တိုင်းသားနဲ့ မတူဘဲ အရှေ့တိုင်းသားနဲ့ ပိုတူတယ်နော် အစ်မ။
အမရေ ... ခရီးသွားတုန်း ဂျာမန်စုံတွဲလို စိတ်ထားကောင်း ဖော်ရွေ ကူညီတတ်သူတွေနဲ့ဆုံရတာ မင်္ဂလာတပါးပဲ။ နောက်ပြီး တခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ခရီးသွားရင်ဆုံရတာလည်း ရှုခင်းတွေကြည့်လို့ဗဟုသုတရသလို ဗဟုသုတတခုတိုးတာပေါ့။
အားကျမိပါတယ် အစ်မခင်မင်းဇော်ရေ့ ။
ရထားလက်မှတ်လို ခရီးစဉ်စာရွက်တွေက လက်မှတ်ရောင်းတဲ့စက်ကနေ လက်မှတ်မ၀ယ်လည်း လိုသလောက်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ကျနော်လည်း နောက်မှ သိရတယ်။ အဲဒါကြောင့် လက်မှတ်စစ်က ငွေချေတဲ့ ပြေစာမပြနိုင်လို့ လက်မှတ်ထပ်ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့။ ပြေစာပြလိုက်တော့ ချက်ချင်းငွေပြန်အမ်းတယ်ဆိုတာကလည်း ဂျာမနီမှာမို့လို့ပဲ။ ရွှေနိုင်ငံမှာဆို လက်မှတ်စစ်ချုပ်တို့၊ ရုံပိုင်ကြီးတို့ ထောက်ခံချက်ပါမှ ရောင်းပြီးသားလက်မှတ်ကို ငွေပြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဥရောပရောက်တုံး ဂျာမနီကို အလည်ရောက်ဖူးသွားတာ မခင်မင်းဇော် ကံကောင်းပါတယ်။
အမရေ ဂျာမနီ မရောက်ဖူးသေးတာနဲ့ အတော်ပဲ.. ဒါနဲ့ ဒီဖက် ဘယ်တော့ လာမှာလဲ
Yes. It is Rai river. I was in Brohl about2months in 2008 which is laying at the Rai river bank and located between Koblenz and Colone. Rai vale is very famous about making Wine.
ဂျာမဏီခရီးစဉ်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုသက်ဦးရေ.. ကျမလဲ ခေါင်းထဲမှတ်မိသလောက် ချရေးနေတာပါ။ တချို့ လွဲမှားမှုတွေ ရှိရင်လဲ လာပြင်ပေးပါဦးနော်။
လာရောက်ဖတ်ရှုနေတဲ့ အားလုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတို့အတွက် မျှဝေပေးချင်စိတ်နဲ့ ဒီပို့စ်ကို ရေးနေတာပါ။ ခရီးသွားရတာကို ကျမက ပျော်ပါတယ်။
ဘယ်က ဖိတ်ဖိတ်.. လာခဲ့မယ်ချည်း ပြောမယ့်လူပါရှင်...။
မီယာရေ.. မီယာ တို့ ဘက်ကို ရောက်ဖို့အဲဒီတုန်းက စီစဉ်ထားပေမယ့် အင်္ဂလန်ကိုလာပြီးရင် ပြန်ဝင်ဖို့ နော်ဝေးကို ရီအန်ထရီ လုပ်မထားမိတာရယ် လုပ်ဖို့ အချိန်မလောက်တော့တာရယ်ကြောင့် မလာတော့တာပါ။ ကံကြုံရင်တော့ ဆုံချင်ပါသေးတယ်နော်။